Niady Hevitra Tamin’ilay Jamba Taloha ny Fariseo | Fiainan’i Jesosy
Niady Hevitra Tamin’ilay Lehilahy Jamba Taloha ny Fariseo
“JAMBA” IREO MPITONDRA FIVAVAHANA
Tsy neken’ny Fariseo fa i Jesosy no nanasitrana an’ilay jamba, ka nantsoin’izy ireo ny ray aman-dreniny. Fantatr’izy mivady fa mety “horoahina hiala amin’ny synagoga” izy ireo. (Jaona 9:22) Tsy ho afaka hifandray amin’ny Jiosy hafa izy ireo raha izany. Hisy vokany be eo amin’ny fivelomany sy ny fifandraisany amin’ny olona izany.
Hoy ny Fariseo: “Zanakareo ve ity, ilay lazainareo hoe teraka jamba? Koa nahoana izy izao no mahita?” Hoy izy mivady: “Fantatray fa zanakay io, ary teraka jamba izy. Fa tsy fantatray kosa hoe ahoana no nahatonga azy hahita ankehitriny, na hoe iza no nampahiratra ny masony.” Nety ho efa notantarain-janany tamin’izy ireo izay nitranga. Nitandrina tsara anefa izy ireo vao namaly ka nilaza hoe: “Anontanio izy e! Efa lehibe izy, ka izy ihany no tokony hilaza ny momba ny tenany.”—Jaona 9:19-21.
Nantsoin’ny Fariseo indray àry ilay lehilahy. Te hampitahotra azy izy ireo ka nilaza fa manana porofo hanamelohana an’i Jesosy. Hoy izy ireo: “Omeo voninahitra Andriamanitra, ka lazao ny marina. Fantatray fa mpanota izany lehilahy izany.” Tsy niditra tamin’ilay fanendrikendrehana ilay lehilahy, fa hoy izy: “Tsy fantatro aloha na mpanota izy na tsia. Izao ihany no fantatro: Jamba aho taloha, fa mahiratra aho izao.”—Jaona 9:24, 25.
Tsy afa-po ny Fariseo ka niteny hoe: “Inona no nataony taminao? Ahoana no nampahiratany ny masonao?” Sahy namaly ilay lehilahy hoe: “Efa nolazaiko taminareo izany, fa tsy nihaino ianareo. Koa nahoana no tianareo hohenoina indray? Te ho tonga mpianany koa angaha ianareo?” Tezitra be ny Fariseo ka niampanga azy hoe: “Ialahy no mpianany, fa izahay mpianatr’i Mosesy. Fantatray fa niteny tamin’i Mosesy Andriamanitra, fa izany lehilahy izany kosa tsy fantatray izay niaviany.”—Jaona 9:26-29.
Gaga ilay lehilahy ka niteny hoe: “Mba mahagaga koa ny tsy ahafantaranareo izay niaviany, nefa izy nampahiratra ny masoko.” Nilaza izy avy eo hoe iza no henoin’Andriamanitra sy ankasitrahany. Nitombina tsara ny teniny hoe: “Fantatsika fa tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra, fa izay matahotra azy sy manao ny sitrapony kosa no henoiny. Mbola tsy re mihitsy hatrizay hatrizay hoe nisy nampahiratra mason’olona jamba hatrany an-kibon-dreniny.” Hoy àry izy: “Tsy mahavita na inona na inona mihitsy izany lehilahy izany raha tsy avy amin’Andriamanitra.”—Jaona 9:30-33.
Tsy nahita havaly azy ny Fariseo ka nanaratsy azy hoe: “Tena teraka tao anatin’ny ota ialahy, ka ialahy indray ve no mampianatra anay?” Noroahiny ilay lehilahy avy eo.—Jaona 9:34.
Ren’i Jesosy izay nitranga, ka hoy izy rehefa hitany ilay lehilahy: “Mino ny Zanak’olona ve ianao?” Namaly izy hoe: “Iza moa izy, tompoko, mba hinoako azy?” Tsy nisalasala i Jesosy namaly hoe: “Efa hitanao izy, ary izy ilay miresaka aminao izao.”—Jaona 9:35-37.
Hoy indray ilay lehilahy: “Mino azy tokoa aho, Tompo ô!” Niankohoka teo anatrehan’i Jesosy izy, ka hita fa nino azy sy nanaja azy. Misy heviny lalina ny tenin’i Jesosy taorian’izay hoe: “Noho izao fitsarana izao no nahatongavako amin’izao tontolo izao: Mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho jamba ny mahiratra.”—Jaona 9:38, 39.
Fantatr’ireo Fariseo nanatrika teo fa tsy jamba izy ireo. Nihambo ho nanampy ny olona hifandray tamin’Andriamanitra izy ireo nefa tsy nanao izany. Niaro tena izy ireo hoe: “Izahay koa ve mba jamba?” Hoy i Jesosy: “Tsy ho nanan-keloka ianareo, raha jamba. Milaza anefa ianareo hoe: ‘Mahita izahay’, koa tsy afaka àry ny helokareo.” (Jaona 9:40, 41) Raha tsy mpampianatra teo amin’ny Israely izy ireo, dia nety ho tsy nahagaga raha nanda an’i Jesosy ho Mesia. Nahay ny Lalàna anefa izy ireo, ka nanao fahotana lehibe rehefa nanda an’i Jesosy.
Nahoana no natahotra ny ray aman-drenin’ilay lehilahy rehefa nantsoin’ny Fariseo, ary inona no navalin’izy ireo?
Inona ny zavatra mitombina nolazain’ilay lehilahy ka nampahatezitra ny Fariseo?
Nahoana ny Fariseo no tsy afa-tsiny rehefa nanda an’i Jesosy?
Hizara Hizara Niady Hevitra Tamin’ilay Lehilahy Jamba Taloha ny Fariseo